DAAWO:- Jubbaland oo soo saartay awaamir culus oo kusaabsan cudurka Coronavirus – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ April 1, 2020 ] Madaxwayne Famaajo oo weerar ku qaaday Guriga uu dagan yahay Madaxwaynihii hore ee Somalia.	Faalloyinka
[ April 1, 2020 ] DAAWO VIDEO Qosol Cali Gurey” Somaliland Waxay Allow Fayska Muqdisho Ku Dhaco,Muqdisho waxay Ledahay Allow Hargeysa Ku Dhaco	Maqal Iyo Muuqaal
HomeFaalloyinkaDAAWO:- Jubbaland oo soo saartay awaamir culus oo kusaabsan cudurka Coronavirus
DAAWO:- Jubbaland oo soo saartay awaamir culus oo kusaabsan cudurka Coronavirus
March 24, 2020 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somali News 0
Guddiga heer dowlad goboleed ee loo xilsaarey ka horataga Caabuqa Coronavirus ee Maamulka Jubbaland ayaa waxaa ay soo saareen go’aano dhowr ah oo looga hortagayo Cudurkaas oo dad badan ay u dhinteen.
Guddigaan oo Heer Wasiiro ah ayaa waxaa ay soo saareen Lix qodob oo ay ugu muhiimsan yihiin in la fasaxay labada todobaad Goobaha Waxbaraashada, in la joojiyey isku imaatinka in la xiro Masaajida qeybta dadka ay ku weesa qaataan, in la yareeyo dhaq dhaqaaqa xaduudaha deegaannada Dowlad Goboleeka Jubbaland iyo qodobo kale.
Guddiga ka hortagga iyo u diyaargarowga xanuunka Covid-19 oo soo saaray amarro looga hortegayo caabuqa Corona
Posted by Jubbaland TV on Tuesday, March 24, 2020
DFS oo kahadashay warka ku saabsan isku day lala damcay in lagu weeraro Madaxwaynihii hore ee Somalia
Degdeg:- Sargaal muhiim ah oo katirsan Alshabaab ayaa lagu qabtay Gobolka Shabeelaha Hoose.
DAAWO:- MD Farmaajo oo ku dhawaaqay Baroordiiq loo Sameynayo R/Wasaarihii hore ee Dalka.
DAAWO:- DFS oo xaqiijisay jirtaanka Geerida Marxuum EX-R/Wasaare Nuur Cadde